Published June 30, 2020 at 10:45 PM CDT
New York, New Jersey fi Connecticut Iowa list warra ummata Iowa irraa kara xiyyaaratin dhufu akka bultii 14 adda bahii laalaman keessatti dabalte.
Gov. Andrew Cuomo fi mormitoonni New Jersey fi Connecticut, torbaan tarte keessa warri mata mataan state sagantaa kana jala aane dhukkuba COVID-19 beekamanii kunis dhukkubni kun akka hir’attu qarqaara.
Haasawaan akka himetti kutaawwan jiraattottaa 100,000 keessa harka 10 dhukubaan qabamu mullisa yookin harka 10 yoo kan qabaman taate harka kana jala oolan.
Waajjiri Cuomo’s akka har’a himettii Iowaanille biyyoota dhuukuba kanaa babal’ataa waan jiruuf jala dabalamte jirti, akkasumas biyyoota kan akka California, Georgia, Idaho, Louisiana, Mississippi, Nevada fi Tennessee dha.
Gov. Kim Reoynos akka jetetti state Iowa dhukuba kana jalaa fooya’uf jiijjiirama baye mullisan, state akka muliisutti umanni baayen virus COVID-19 kana irraa akka fayyaa jiru mullisa.
Wiyxata irraa jalqabee state Iowa akka Covid-19 irraa dandamataa jiran bultii 28 duuba murteesani, kun kan jijjiiramu yoo namni amma hospitaala jiruu yoo kan fayyee bahuu irraa laalame murtawaa.
Reynolds akka jetteti Iowa amma dhukuba kana irraa dandamachuu kan mullistuu harka 60% irra jirti. Garuu adeemsi haarawni fudhataa jiran kun Iowa dandamachuu yoo ta’ef harka 80% ulgadata jedhan kana jechuun namni dhukuba kanan namni qabame mana taa’e dhukkuba kana irraa dandamachuu nidanda’an.
Namni dabalataan 5 sababa COVID-19 Iowa keessati du’aniiru, akkasumas namni haarawni dabalataan qabame 213 dha akka state akka har’a gabaasseti.
Akka gabaasa state namni COVID-19 due 712 gahee jira, namni shanii kale dabalatee akka website Coronavirus.Iowa.gov tti.
Har’a akka guutiti namni qabamee 28,941 yoo ta’u, akka kaleerra nama 213 dabalee.
Magaala Woodbury County keessati namni dabalataa 6 guyyaa har’a qabamuu himame. Sababa COVID-19 namni du’e 43 gaheera.
Akka odduu guyyaa har’aa himaaniti, mani fayya Sioux land Mercy One fi mana fayyaa Unity point ST. Luke’s akka jedhanitti dhukubsattoota Covid-19 nama 23 akka yaalu jiran himan.
Akka ibsi jedhutti , namoota COVID-19 qabaman bor hospitaali akka hin gabaasne himan.
Magaala Nebraska waliigalatti namni qabame 19,000 yoo ta’u kan du’emmoo 269 dha. State keessati waliigalatti nama 243 kan haarawa qabame dha.
Jiraatan magaala Dakota County tokko sababa Coronavirus du’uu gabaafame.
Manni fayyaa Dakota County akka himettti Northeast Nebraska County keessati namni 35th kaleessa akka due himan, nama haarawa qabame 14 dabalatee. Dakota County keessati waliigalatti namni qabame 1,761 gaheera.
South Dakota namni waliigalatti qabame 6,716 yoo ta’u har’a namni 35 kan qabaman dabalateeti.
Local News LocalIowaNebraskaSouth DakotaIowa Governor Kim ReynoldsnewsCOVID-19OromoGovernor Andrew Cuomo
Kutaa Iowa keessati sababa COVID-19 namni lama dabalataan du’uun himame walii galatti namni du’e 688 gaheera. Qixxee ol kan ta’an Long-term facilitii…
Seerri haaroyni hojii irra olfamuuf jalqabamaa jira, sababa miidha bifaafi eenyumaa isaanitin irra gahaa jiruuf poolisooni Iowa seera haarawa…
Magaala Woodbury County keessati namni har’a haarawa COVID-19 qabame 17 dha. Waliigalatti namni qabame 3,112 yoo ta’u waliigalatti kan due ammoo 43 dha.…